Muhiimada Iniesta, Halista Ay Wajihi Karaan, Rajadooda CL & Shirka Jaraa’id Ee Busquets Ka Hor Kulanka Chelsea %
Muhiimada Iniesta, Halista Ay Wajihi Karaan, Rajadooda CL & Shirka Jaraa’id Ee Busquets Ka Hor Kulanka Chelsea
Sergio Busquets, ciyaaryahanka Barcelona, khadka dhexe uga dheela, kaasoo warbaahinta la uwaramay ka hor kulanka ay la balansan yihiin habeenka Arbacada ah dhigooda Chelsea, ayaa wuxuu ka hadlay muhiimada uu uleeyahay naadigooda Andres Iniesta.
“Andres Iniesta, wuxuu na caawiyaa isaga oo banaanka garoonka iyo gudaha garoonka ku jira,” ayuu Basquets ku bilaabay hadalkiisa.
“Wuxuu ka caawiyaa kooxda waxyaabo kala duwan oo badan, waana arki doonaa hadii uu Berri na caawin doono, kadib tababarkii aan ogeen inuu nala qaatay,” ayuu hadalkiisa kusii daray, laacibkaan udhashay wadanka Spain.
Mar uu ka hadlayay kulanka iyo sida uu u arko ayuu yiri: “Waa kulan aad u adag, kaasoo ku xirnaan doona sida ay koox walba udheesho.
“Labada koox waxay haystaan ciyaaryahano wax go’aamin karta, marka waan Koontarooli doono kulanka, wax badana waan haysan doonaa kubadda,” ayuu sii daba dhigay.
“In kulanka uu kusoo dhamaaday [0-0] ayaa ah natiijo noo fiican, laakiin gool walba oo ay Chelsea, hesho wuxuu si toos ah ugu dirayaa iyaga wareega Xiga, marka waxaan udheeli doonaa kulanka sidii aan uguuleysan lahayn.
Halista Eden Hazard mar wax laga weydiiyay ayuu yiri: “Waa xaqiiqo inuu yahay ciyaaryahan wanaagsan, kaasoo xirfad sare leh.
“Laakiin, waxaan ognahay in Chelsea, aysan ahayn isaga oo kaliya, sidaas darteeda ciyaaryahan walba oo Chelsea, ka tirsan, waxaan ka yeelan doonaa feejignaan badan.
“Lugtii hore [Hazard] wax la taaban karo ma uusan ka sameyn garoonka, sidaas darteeda, waan aragnaa sida uu kulanku noqdo.
Rajadooda inay ku guuleystaan kulanka ayuu ka yiri: “Horta hada waxaan diirada saareyno ayaa ah inaan kasoo lataabno wareega Bug-baxa, kadib waan arki doonaa waxa dhaca, maxaa yeelay talaabooyin badan ayaa ka horeeya meesha aad ka hadleyso.
Ugu dambeyn, Sergio Basquts, oo fariin udiraya taageerayaasha ayaa wuxuu usheegay inay garoonka usoo camiraan kooxdooda, islamarkaana ay wax badan usacabo tumaan, wuxuu kaloo usheegay xidigaha ay isku kooxda yihiin inay si adag ay ushaqeeyaan.
Barcelona vs ChelseaChampions LeagueSergio Basquets
Muxuu kusoo dhamaaday kulankii u dhexeeyay Kooxaha madbacada iyo Batroolka